Ikhaya STARS E-EUROPE I-Jamaal Lascelles Ingane Yendaba I-Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba Egcwele Yebhola leGoli eliziwa nje ngegama "Star Boy". I-Jamaal Lascelles Ingane Yethu Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi unomlando wokuqokwa njengomncinyane kunazo zonke ku-Premier League. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka i-Jamaal Lascelles 'Bio ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Jamaal Lascelles Ingane Yendaba Indaba Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
I-Jamaal Lascelles yazalwa ngosuku luka-11th lukaNovemba 1993 kunina, uJill Lascelles nobaba, uTim Lascelles (owayengumdlali wezilwane waseBrithani Basketball League) emzini waseNgisi waseDerby, e-United Kingdom. Ngaphansi kwesithombe sabazali abathandekayo bakaJasal Lascelles.
Uma ebheka abazali bakhe ngenhla, omunye angasikisela ukuthi i-Jamaal Lascelles inezimpande zase-Afrika ngenxa yokubukeka kukababa. I-Jamaal efanekisiwe ngezansi yakhula nomfowabo uRema emzini ojabulayo oholwa ngabazali bakhe abanothando ababenomshado wabo lapho bobabili abafana bebancane (okufanekiselwa ngezansi).
Ngokungafani nabaningi bebhola lezinyawo ezakhulela emakhaya enothando, i-Jamaal Lascelles icala lihlukile. Bobabili yena noRema (umfowabo) bakhulela ekhaya lokuthanda ibhasikidi ngenxa kababa wakhe, umlando waseBrithani webhasi.
Okufanelekile, ubuqotho nokushayela bekuyingxenye yokwakhiwa kukaLascelles kusukela ebuntwaneni. Njengoba uJaalal Lascelles engumntwana omncane, wayehlale efuna okungaphezulu kwezemidlalo (ibhola lebhola lebhola lezinkinobho).
Jamaal Lascelles Ingane Yendaba Indaba Untold Biography Facts -Umsebenzi we-Buildup
Imizamo yokuqala yezemidlalo yamaJaal Lascelles yafika nebhola ezandleni zakhe kunokuba ifike ezinyaweni zakhe. Ngokufanelekile, wakhula ukudlala ibhasikidi ngenhloso yokulandela izinyathelo zikayise. Akazange angene ebhola kuze kube yilapho ezayo. Njengoba esake esho ...;
Kusukela eminyakeni engama-4 noma emihlanu, ubaba wayebeka ibhasikidi ezandleni zami, futhi sasiya futhi simbukele edlala futhi eqeqesha nsuku zonke.
Jamaal yaqhubeka ...
"Uzosihola emasimini futhi asilahle phansi, mina nomfowethu sihlale lapho futhi sibukele edlala. Kwafika eminyakeni lapho kufanele nginqume ukuthi ngabe ngifuna ukudlala ibhola noma ibhola. "
Ngokungafani nabazali abathile abazokwenza, abazali bakaJamal bekuyisihluthulelo sokusekela isinqumo sakhe sokukhothamela ukunqotshwa kwebhola esikhundleni sebhola basketball. Isinqumo sikaJahal sokudlala ibhola sifike ngenxa yokuthi basketball yayingeyona enkulu njengoba ibhola eNgilandi. Ngemva kokwenza umqondo wakhe, abazali bakhe bamnika ukusekelwa okudingekayo mayelana nendlela yokuqhubeka nokusebenza kwakhe okusha. Bamyisa ohlelweni lwentsha yaseNottingham Forest lapho uJamaal enecala eliphumelelayo.
I-Jamaal Lascelles inomdlavuza webhola lebhola lambona ebhalisa iqembu laseNottingham Forest lendawo yentsha yendawo, eyamnika isiteji ukukhombisa amakhono akhe.
Jamaal Lascelles Ingane Yendaba Indaba Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
UJaalal wabonisa isithembiso sokuqala ngemuva kokujoyina intsha yentsha yase-Nottingham Forest. Njengengane, wayengeyena umdlali onolwazi kakhulu noma onesipiliyoni, ngakho-ke uLascelles kwadingeka asebenze kanzima. NjengoJamaal ubeka khona I-NUFC ingxoxo;
Abanye abadlali, uma benza kahle, bayothatha izinyawo zabo emgodini, kodwa kimi kungcono kakhulu isizathu sokusebenza ngisho nakakhulu. Yilokho nje engiyikho.
Ngonyaka we-2011 eneminyaka engu-18, uJamal Lascelles wakhuthazwa eqenjini lokuqala lokuqala lase-Nottingham Forest. Eminyakeni emithathu ngemuva kokuqala kwakhe, u-Laselles oneminyaka engu-20 wayesezibonele njengomunye wabavikeli abasha kakhulu.
Ukuthuthukiswa kwakhe kwabonakala ngesikhathi ngesikhathi esilindelekile eNgilandi. Ngesikhathi esingaphansi kweminyaka eyi-21 yeNgilandi, Lascelles wakhanga isithakazelo sikaNewcastle owawuthola ku-2014.
Ngamathuba onke afika eNewcastle, uJamaal wanikela ngokusemandleni akhe. Ukubonisa kwakhe ukubonisana njengoba kubonwe empini yakhe kanye nendlala yokuphumelela kwenza izwe lihlale futhi liqaphele. Umsebenzi wakhe onzima wawuvuzwe ngo-4 Agasti 2016, ngosuku ayekhethwe ngalo Benítez ukuze abe ngumphathi weqembu elisha laseNewcastle United, ephumelela abahambayo Fabricio Coloccini.
Kuze kube sekupheleni, amandla kaJaal Lascelles akwazi ukubhekana nodumo ngokuqondile ngokulingana nendlela avikela ngayo ibhola ebhokisini le-6-yard. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Jamaal Lascelles Ingane Yendaba Indaba Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ngaphambi kwayo yonke indoda enhle, kukhona owesifazane omkhulu, noma kunjalo inkulumo iya. Ngemuva kwe-Lascelles ephumelelayo, kunevili elihle kakhulu elibonwe kumuntu weHarps Rai, okufanekiselwa ngezansi.
Abalandeli abaningi baseNewcastle baye bachaza i-Jamaal Lascelles Girlfriend, i-Harps Rai ukuthi ifana nayo Kim Kardashian.
Jamaal Lascelles Ingane Yendaba Indaba Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
Ngokuqondene nomlando wakhe womndeni, uJaalal ubamba isikhundla sakhe esiphakeme kubazali bakhe uTim, owenza imali eminingi ebusweni bakhe.
Jamaal Lascelles wakhuliswa endlini yothando oluphelele nenhlonipho. Abazali bakhe abaye ndawonye iminyaka engaba ngu-20 yomshado (bheka isithombe somshado ngezansi) ubonise isibonelo esihle ezinganeni zabo nabathandekayo.
Kuyabuhlungu ukuthi abadlali bebhola abathandi Jorginho, U-Alexis Sanchez futhi Memphis Deplay abakaze babone abazali babo bebonke ngaphambi kokuba bawele iminyaka yobudala 8. U-Lascelles, ubaba wakhe wasebenza kanzima futhi umama uye wazinikela kakhulu. Ngokufanelekile, i-Jamaal inomndeni onwebile kakhulu njengoba kuboniswe esithombeni ngezansi.
Ukuphumelela akuyona ingozi emndenini waseLascelles. Kuwumsebenzi onzima, ukubekezela, ukufunda, ukutadisha, ukudela kanye nakho konke, ukubumbana njengoba kuboniswe esithombeni ngezansi.
Mayelana nomama kaLascelles: Uma kuziwa ngokusondelana, umama kaJamaal uphatha ngokungafani nobaba wakhe nabantwana bakhe. Uthi bewazi?? ... Ikholi yokuqala yokuqala uJamal eyenziwe lapho eqala ukunikeza isihloko sakhe sokuthi u-Newcastle uthathe umama wakhe.
UVascelles uyavuma ukuthi unina unjani, obengumlindi ovamile wamageyimu akhe nothando olukhulu lwezinja zakhe. U-Jill uphinde uthumele i-tweet ehamba phambili nge-1,000 nge-imeyili eveza ukuthi wayesebenzisa ingoma ye-£ 5 kuyo yonke imigomo ayifinyelele emuva ezinsukwini zakhe ezisencane.
Abafowethu: I-Rema Lascelles ungumfowabo weJamaal Lascelles. U-Rema, ngokungafani noJamal, walandela izinyathelo zikayise ngokunamathela ebhodini.
Njengesikhathi sokubhala, i-Rema idlala i-Men's Basketball eHawaii Pacific University, eyunivesithi yangasese e Honolulu, United State. Waphumelela eDerby College eDerby, eNgilandi, lapho adlala khona ibhasikidi ye-Great Britain U20s lapho athola khona i-EBL D1 Trophy.
Jalen Lascelles: UJalen ungumfowabo omncane kakhulu uJamalles. Uneminyaka engu-11 ubudala ngesikhathi sokubhala.
UJalen udlala eqenjini elisha le-Nottingham Forest. Ekuqaleni, wakhetha ukulandela izinyathelo zomfowabo kaJaalal njengoba iphupho lakhe lizodlala uNewcastle United ngelinye ilanga. UJalen uqeqeshwe kahle kakhulu. Ugcinwe futhi uthanda imisebenzi yasekhaya.
Jamaal Lascelles Ingane Yendaba Indaba Untold Biography Facts -Ukuhlaselwa
Ngo-23 April 2014, igama likaJaal Lascelles liyizo zonke izindaba ngenxa yokuthi wayephakathi nendawo yokushaya ibha.
UJaalal usolwa ngokuhlaselwa eDerby ebusuku, lokhu kwaholela ekubeni aboshwe futhi asolwa enkantolo.
UVancelles wabhekwa ngemuva kokumangalelwa ngokusemthethweni. IJaji uJonathan Gosling unikeze isicelo sebheyili yaseLascelles ngemuva kokuhlaziywa kobufakazi beCCTV. Kwabonakala nge-CCTV ukuthi i-Jamaal ayingeyona eyabangela ukulimala okusekelwe yisisulu.
Njengasekuqaleni I-23rd kaFebhuwari i-2015, icala lakhe lakhishwa. Ngemva kwalokho, uLascelles uthe ku-twitter;
"Ngemva kokumangalelwa ngecala futhi ngecala lokushaya, manje ngingajabula ngokusho ukuthi zonke izinkokhelo zishiywe futhi igama lami liye lakhishwa."
Jamaal Lascelles Ingane Yendaba Indaba Untold Biography Facts -Fight with Diame
Ngo-Okthoba 2017, i-Jamaal Lascelles yayinezempi yokuqeqesha nabalingani U-Mohamed Diame.
Abadlali ababili bazizwa benamahloni ngamaphutha abo futhi bashesha ukuxolisa kubalingani nabo, abaphathi beqembu kanye nabalandeli. Ukuze benze, bazinikela ukuba bathathe lonke iqembu lesikhathi sokuqala nabasebenzi ngaphandle kwasemini.
Jamaal Lascelles Ingane Yendaba Indaba Untold Biography Facts -Mayelana nokuba nguKaputeni
I-Jamaal Lascelles yenziwe nge-skipper URafa Benitez ngenxa yamakhono akhe obuholi bomvelo. Yilokho akushoyo ngokuba ne-captaincy armband emahlombe akhe.
"Ngiyacabanga, ngibe ne-CAPTAIN, ngifanele ngifinyelele ngaleyo ndlela njengoba kunjalo, INDLELA ENGIYE NGABANYE ABANTU ABANTU, LOKHO ENGINGAKHO UKUTHOLA ABANTU ABANYE ABANYE ABANYE ABAKHO, UNGAZWAZI OKUTHI NGIYINI? UKUKWAZI ABAKHULU. Ngicabanga ukuthi ngikwenzile, futhi ngicabanga ukuthi izinsizwa ziyangibheka kimi, indlela engiyiqeqeshe ngayo futhi ngiyitholile. "
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Jamaal Lascelles Childhood Indaba yethu kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.